च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिड र बायन भिड्दै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिड र बायन भिड्दै
बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १७:०७ मा प्रकाशित !
एजेन्सी । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति रियल मड्रिड र बायन म्युनिखबीच महत्वपूर्ण खेल हुँदैछ ।
बायन र म्युनिखबीच च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा नेपाली समयअनुसार आज राति साढे १२ बजे प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । बायनको घरेलु मैदान अलायन्ज स्टेडियममा हुने खेल निकैनै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।
दुवै क्लब स्टार खेलाडीले भरिएका छन् । दुवै राम्रा र बलिया क्लब भएका कारण कसले खेल जित्ला भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो हुने फुटबल पण्डितहरु बताउँछन् । यद्यपी गएको पाँच खेललाई मध्य नजरगर्दा रियल मड्रिड चार पटक विजयी भएको छ भने बायन मात्र १ पटक विजयी भएको छ ।
यस सिजन घरेलु फुटबल ला लिगामा उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न नसकोको रियल मड्रिड कोपा डेल रे कपको क्वाटर–फाइनलबाट बाहिरिएको थियो । जुन उपाधि बार्सिलोनाले जित्यो । स्पेनिस ला लिगा उपाधि जित्ने लगभग संभावना बोकेको मड्रिडको आशा भनेकै अब च्याम्पियन्स लिग जित्नु हो । अर्का पट्टि निकैनै फर्ममा रहेको टोली बायन घरेलु लिग जर्मन बुन्डेस लिगाको शिर्ष स्थानमा रहेको टोली हो ।
बायनले यस सिजन सबै खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ । मड्रिडपनि पछिल्लो समय फर्ममा आएको छ । आज दुवै टोलीले आफ्नो पहिलो रोजाइकै खेलाडी मैदानमा उतार्दैछन् । मड्रिडका तर्फबाट आज रोनाल्डो, बेल, बेन्जेमा, मार्सेलो, रामोस, क्रुज, मोड्रेक लगायतका खेलाडी बायन विरुद्ध मैदान उत्रनेछन् ।
यस्तै बायनका तर्फबाट लिवानडोस्की, थोमस मुलर, जेम्स रोड्रिग्वेज, रिवेरी, बोट्याङ लगायतका खेलाडी मड्रिडविरुद्ध मैदान उत्रदै छन् । खेलअघि मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले मड्रिडबाट लोनमा बायन पुगेका रोड्रिग्वेजको बारेमा प्रशंशा गरे ।
उनले रोड्रिग्वेजले मड्रिड नछाडोस् भन्ने प्रतिक्रिया जनाए । रोड्रिग्वेज उत्कृष्ट खेलाडी भएका कारण उनले जहाँ गएपनि आफ्नो जादु पस्कन क्षमता राख्ने जिदानको भनाइ छ । आज रोड्रिग्वेज पूर्व क्लव मड्रिडविरुद्ध मैदान उत्रदै छन् । उनले मड्रिड शैली बुझेकाले आज उनी मड्रिडका लागि ठूलो भारी पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सरकारी प्रक्षेपण
NEXT POST Next post: साउदी अरबमा एक नेपालीलाई मृत्यु दण्डको फैसला
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १७:०७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १७:०७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १७:०७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १७:०७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १७:०७